Ny tantaran’ireo telolahy ao amin’ny Bokin’i Daniely (דָּנִיֵּאל Daniye’l, Andriamanitra no mpitsara) dia manambara ny fanirian’ny olombelona mba havotan’Andriamanitra manoloana ny fitsarana tsy marina, satria Izy no hany Mpitsara (dan). Ny anaran’ireo telo lahy Anania (חֲנַנְיָה Hananyah, Andriamanitra mpamindra fo), Misaely (מִישָׁאֵל Miysha’el, Iza no toa an’Andriamanitra?) ary Azaria (עֲזַרְיָה `Azaryah, Andriamanitra no namonjy) dia manamafy ny endrik’izany Andriamanitra manafaka mandrakariva ny mpanompony amin’ny fijaliana izany.
Manoloana ny fahaviniran’ny mpanjaka Nabokodonozora (נְבוּכַדְרֶאצַּר Nebokadnehtsar, harovan’i Nebo -andriamanitry ny Babilona- anie ny satroboninahiny), ireo naman’i Daniely izay nomena anarana hifanaraka amin’ny andriamanitra “Nebo” (בֵּלְטְשַׁאְצַּר Beltesha’tsar, Baltasara: Andriamanitra hiaro ny ainy), i Sidràka (le grand scribe), Misàka (invité du Roi) sy Abed-Nego (serviteur de Nego-Nebo) dia nandà an-kitsirano ny hanompo ny andriamanitra Nebo na ny hiondrika eo anatrehan’ny Mpanjaka. “Raha mahavonjy anay tokoa ny Andriamanitray dia hovonjeny anatin’ny memy mirehitra izahay”.
I Daniely novonjena tamin’ny vavan’ny liona, ireto zatovo ireto kosa voavonjy tamin’ny afo. Saingy eo amin’ny fiainana an-davanandro dia toa tsy izany no zava-misy. Toa zary anganon’ny Ntaolo ihany ny fitantaran’i Daniely. Maro kokoa manko ny olo-marina vonoina ary an-kavitsiana no hahenoana ireo izay anehoan’ny Tompo ny Voninahiny amin’ny fahagagagana tahaka izany, nan ny Zanany lahitokana aza tavela maty teo ambony hazo.